Dina Mufti Jimacaha ayaan go,aan ka gaari doonaa codsiga Midowga Afrika
AdisAbaba:-Dowlada Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday goorta ay go,aan ka gaareyso in ay qaadato magaca AMISOM ayna ka qeyb qaadato duulaanka lagu qaadayo gobalada Koofureed oo ay haatan gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab .
Afhayeenka wasaarada arimaha dibada ee dalka Itoobiya Dina Mufti oo wareysi siiyey wakaalada wararka ee Reuters ayaa sheegay maalinta jimcaha ah in dowladiisa ay go,aan kama danbeys ah ka qaadan doonto codsiga uga yimid Ururka Midowga Afrika.
Ciidamada Itoobiya ayaa haatan ku sugan gobalada Dhexe iyo Hiiraan waxaan sidoo kale ay soo buuxdhaafsheen xaduudaha kale oo ay la wadaagaan dalka Soomaaliya.
Mar ay wakaalada wararka ee Reuters ay wax ka weydiisay Afhayeenka wasaarada arimaha dibada Itoobiya Dina Mufti in ciidamadooda ay soo galeen dalka Soomaaliya ayuu waxaa uu inkiraad cad ku jiiday in ay soo galeen gudaha Soomaaliya.
Maalinta Jimcaha ah ee nagu soo aadan ayaa waxaa ku kulmi doona magaalada AdisAbaba ee xarunta dalka Itoobiya madaxda wadamada Geeska Afrika waxaana looga hadli doonaa laba ajando oo kala ah amaanka dalka Soomaaliya iyo in ciidamada Itoobiya iyo Kenya la siiyo magaca AMISOM.
Dhanka kale waxaa maalinta birito ah gaari doona magaalada AdisAbaba ee xarunta dalka Itoobiya gudoomiya baarlamaanka DFKM Shariif Xasan Sh Aden iyo wafdi uu horkacyo waxaana wafdigaas ay u badan yihiin xildhibaano iyo wasiiro ka soo jeeda Bay iyo Bakool waxaana ay kulan la qaadan doonaan Ra iisalwasaaraha Ethiopia Melas Zanawi
Kulanka ayaa waxaa looga hadli doonaa Maamul gobaleed loo sameyn doono dadweynaha Bay iyo Bakool waxaana arintaas ka danbeysa dowlada Itoobiya iyo Kenya iyaga oo doonaya in ay furin dagaal oo cusub ka furtaan gobalada Bay iyo Bakool.
Halkan ka Akhriso qoraalka ay Reuters oo English ah